एउटा यात्रा सँग लिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो एक सुटकेश लुगा र ज्ञान को पूर्ण छैन। यो युरोप स्वतन्त्र यात्रा को विशेष गरी साँचो हो (का भन्न गरौं)। किनकी, यात्रा एजेन्सी मा छुट्टी को केही अद्भुत दिनको लागि एउटा निर्देशित भ्रमण किन्न कहिल्यै तयार - यो सबै मुद्दाहरू र तयारी तपाईंले मुक्त।
तपाईं यात्रा गर्न आवश्यक सबै - एक धेरै मुद्रा भुक्तानी र तपाईं अरूको विचार हुनेछ: टिकट, कसरी किन्ने स्थानान्तरण व्यवस्था, होटल, पर्यटन, नाश्ता, लंच, डिनर, केही स्थानीय संग संचार मा जाँच गर्नुहोस्। तर यति रोचक, सही?
निस्सन्देह, कसैले म चाहँदैनन् छुट्टी मा केहि सोच्न मलाई सहमत छैन र भन्न। र तपाईं यस्तो सही छ। तर, मेरो विचारमा, अर्को देशमा गएर, यो आवश्यक भाषा कम्तिमा मूल कुराहरू थाहा छ। कम्तिमा एक साथी रूपमा अभिवादन र अलविदा भन्न। तपाईं पूर्ण भाषा सिक्न छैन। प्रयासहरू पक्कै मूल्यांकन गर्नेछ र थप सजिलै मदत - तथापि, तपाईं प्रयासहरू आफ्नै भाषा मा स्थानीय मान्छे संग कुराकानी बनाउन भने चिन्ता छैन।
सबै हामी स्कूलमा सिक्न अंग्रेजी को (वा 80%)। एकदम wrongly - तर, लाग्छ सबै युरोप मा थाहा र अंग्रेजी बोल्न भनेर। यस्तो पेरिस वा रोम रूपमा - - हो, तपाईं प्रमुख पर्यटक शहर मा बुझ्न सक्षम हुनेछ (ito सबै र सबै ब्लक छैन), तर, उदाहरणका लागि, तपाईं केही इटालियन सिसिली उजाडस्थानमा कल भने - आफ्नो अंग्रेजी बेकारी छ: स्थानीय छ तपाईंले तिनीहरूलाई अंग्रेजी मा, पनि रूसी मा, पनि चिनियाँ बताउन पनि बुझ्दैनन्। तर तपाईं इटालियन व्याख्या गर्न, र थप्न प्रयास गरेका छन् भने साइन भाषा, त्यसपछि कसरी पक्का लागि केहि व्याख्या गर्न।
त्यसैले, कुनै पनि यात्रा अघि, म तपाईंलाई किन्न, डाउनलोड फोन वाक्यांशपुस्तकपट्टीसक्षम र शब्दकोश सल्लाह। त्यसैले, इच्छाएको भाषामा एक वाक्यांश अनुवाद गर्न कुनै पनि समयमा सक्षम हुन। त्यहाँ एक वाक्यांश लिन धेरै अवसर छन् - उदाहरणका लागि, एक पुस्तक किन्न एक पुस्तक पसल मा (मुद्रित संस्करण), तर यो आफ्नो सामान मा ठाउँ लिन सक्छ। र सबै शब्दहरू तपाईं आवश्यक भन्ने तथ्यलाई। आखिर, हामी भाषा सिक्न अभिप्राय छैन - हाम्रो लक्ष्य हामीलाई बुझ्न छ, र पाठ्यक्रम, आफूलाई हामी व्यक्त गर्न खोज्नुभएको कुरा बुझ्न। त्यहाँ स्मार्टफोन, ट्याब्लेट लागि धेरै आवेदन छन् - तपाईं डाउनलोड र आफ्नो उपकरणमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो धेरै सजिलो हुनेछ। तपाईं पनि आधारभूत वाक्यांश दिइएको अवस्थामा आवश्यक छन् भन्ने सूची जो वाक्यांश पर्यटक, को साइटहरु भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बाहिर छाप्न र तपाईंले लाग्न सक्छ। ट्याब्लेट वा फोन discharged गर्न सकिन्छ, र मुद्रित पृष्ठ को एक जोडी सँगै पनि एउटा सानो महिला गरेको हाते झोला, पुस्तक धेरै ठूलो छ: यो धेरै सुविधाजनक छ।
वा तपाईं (दोकान, रेलवे स्टेशन, रेस्टुरेन्ट, स्थान गर्न निर्देशन कसरी पाउन बारेमा प्रश्नहरू मा) सजिला आउन सक्छ भन्ने वाक्यांश को सूची बनाउन। यसलाई छाप्न र यो सुटकेश मा राखे। यस मामला मा, तपाईं निश्चित गलतफहमीले नडराऊ, तपाईं अंग्रेजी मा एक गलतफहमीले भनिन्छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा बीमा गरिनेछ।
स्पेनका आदिवासी जनसंख्या। ethnology
म फिनल्याण्ड तपाईं एउटा भिसा चाहिन्छ?
"भिक्टोरिया र अल्बर्ट" संग्रहालय कहाँ? फोटोग्राफी को संग्रहालय
कसरी उपयोगी chicory स्तनपान?
स्वादिष्ट स्क्वास casserole खाना पकाउने। सर्वश्रेष्ठ व्यञ्जनहरु
"Shiseido आजसम्म ब्लूम": ग्राहक समीक्षा
खस्छ "Aktipol": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, मूल्य, विवरण
खेल StarCraft2सिस्टम आवश्यकताहरु, वर्णन र समीक्षा